ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွေကနေ ကိုရို နာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်သလား? ဘယ်လို ဆေးကြောကြမလဲ - VPS - Shweman Online Media
ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွေကနေ ကိုရို နာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်သလား? ဘယ်လို ဆေးကြောကြမလဲ
admin | April 8, 2020 | Health, Knowledge | No Comments
ဈေး ကဝယ်လာတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအပေါ် ဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ပါလာမှာ စိုးကြမှာပါ။ တယောက်ယောက်က ချောင်ဆိုးသွားရင်၊ လက်နဲ့ကိုင်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ တွေးကြတာပါ။
အခုအချိန်အထိ ပိုးရှိတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားမိလို့ ကူးစက်တဲ့ Case မရှိသေးပါ။
🇪🇺 European Food Safey Authority က ထုတ်ပြန်ထားချက်မှာ အစားအစာက ကူးစက်မှု မတွေ့သေးပါတဲ့။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Dr Jeffery Vanwingen ဆိုသူက Youtube မှာ ဆပ်ပြာနဲ့ဆေးပြတဲ့ တာကို တွေ့ဖူးပါတယ်။
တကယ်တော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ဆပ်ပြာနဲ့ဆေးခြင်းဟာ ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကို ပိုဖြစ်စေပါတယ်။ အသီးအရွက်တွေမှာ အပေါက်ငယ်ကလေးတွေပါပြီး ဆပ်ပြာကို စုပ်ယူပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆေးဖို့ အထူးစီမံထားတဲ့ ဆပ်ပြာလိုအရည်မျိုးဆိုရင် ပြဿနာမရှိပါ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ဆပ်ပြာနဲ့ ဆေးခြင်းဖြင့် အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း စတာတွေ ဖြစ်စေတတ်တာကို သတိပြုပါ။ အရက်ပျံပါတဲ့ ရေမလိုဆေးရည်နဲ့ ပွတ်ဆေးတာလည်း လုံးဝမလုပ်သင့်ပါ။ ရေရောထားတဲ့ အစွန်းချွတ်ဆေး Bleach က အန္တရာယ်အလွန်များပါတယ်။ လုံးဝမလုပ်ရပါ။ Vinegar ရှာလကာရည်နဲ့ လီမွန် Lemon Juice တွေကလည်း မထိရောက်ပါ။
ဆပ်ပြာကို မဖြစ်မနေသုံးရမှာက စဉ်းနှီးတုံး၊ ဓါး နဲ့ လက်ပါ။ အားလုံးသတိမထားမိတာက ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထက် အန္တရာယ်များတာကလှီးတဲ့ စဥ့်နှီးတုံးပါ။ ပြီးတော့ လှီးတဲ့ဓါး။ အသားလည်း ဒီစဥ့်နှီးတုံးနဲ့လှီး၊ အသီးအရွက်လည်း ဒါနဲ့ပဲလှီးတာ အန္တရာယ်များလှပါတယ်။
အသားလှီးဖို့ သပ်သပ်၊ အသီးအရွက်လှီးဖို့ သပ်သပ် စဥ့်နှီးတုံးနဲ့ ဓါးကို ခွဲထားပါ။ အသားလှီးထားပြီးတော့ ရေဆေးပြီးပေမယ့် သခွားသီးထပ်လှီးခြင်းဟာ အန္တရာယ်များပါတယ်။
ဓါးတွေကို နံရံကြား၊ စားပွဲကြားထိုးခြင်းကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ကြရပါမယ်။ ဒီကာလမှာ အစာအဆိပ်သင့်လို့ ဆေးရုံရောက်ရရင် မချောင်ပါ။
ဈေးကပြန်ပြန်လာခြင်း လက်ဆေးပါ။ အသီးအရွက်၊ အသားငါးကို မကိုင်ခင်နဲ့ကိုင်ပြီးရင် လက်ကိုဆပ်ပြာနဲ့ဆေးပါ။ ဒီ virus အတွက် အဓိကစိုးရိမ်ကြမှာက ကန်ဇွန်းရွက်၊ မြင်းခွာရွက်၊ သခွားသီး စတဲ့ အသီးအရွက်တွေလို့ တွက်မိပါတယ်။
ဒီကိစ္စကို လိုက်ဖတ်ကြည့်တော့ ဆပ်ပြာနဲ့ အသီးအရွက်ကို ဆေးတာကို အားမပေးကြပါ။ ကျနော်တို့ လုပ်သင့်တာက မိရိုးဖလာနည်းဖြစ်တဲ့ ဆား နည်းနည်းထည့်ပြီး ရေနဲ့ဆေးတာပါပဲ။
Centre for Science and Enviroment CSE ရဲ့အဆိုအရ ဆား ၂% ပါတဲ့ရေအေးနဲ့ဆေးရင် ဓာတုဓာတ်ကြွင်း ၇၅% ရာနှုန်းကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်တဲ့။
ဆေးနည်း (၂) နည်းရှိပါတယ်။
(၁) ရေအေး ၄ ခွက်ကို ဆား ၂ ဇွန်းနှုန်းနဲ့ ဖျော်ပြီး အသီးအရွက်ကို ရေစိမ်ထားပါ။
(၂) ရေများများရရင် ရေပိုက်ကရေနဲ့ ကြာကြာ ဆေးချတာမျိုးက အကောင်းဆုံးနည်းပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့လိုဆေးခြင်းတွေဟာ ပိုးရှိရင် ၉၀% နဲ့ အထက် ဖယ်ပစ်မယ့်နှုန်းက အလွန်များပါတယ်။ ဒါက ကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုယ်တတ်နိုင်သမျှ ပိုးသန့်အောင်ဆေးဖို့ပါ။
စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ အစားအသောက်ပြင်ဆင်ရသူတွေ အနေနဲ့ ဒီလိုကာလမှာ အထူးဂရုပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေမကောင်းသူရှိရင် အလုပ်မှ အနားပေးပြီး အစားအသောက်ကို ထိတွေ့သယ်ယူခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း…
အမေ့ ထက် ၈ နှစ်ကြီး တဲ့ ၅၈ နှစ်အမျိုးသမီး ကို လက်ထပ် ယူခဲ့ တဲ့ ၁၉ နှစ်သား မြန်မာ လူငယ်လေး
COVID-19 ဖြစ်စဉ်များနှင့် တူညီနေသည့် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်က စပိန်တုပ်ကွေး